गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर श्रीमानसँगै क्रसरमाफियासँग अशुली धन्धामा, मेयर के गर्दै छन ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर श्रीमानसँगै क्रसरमाफियासँग अशुली धन्धामा, मेयर के गर्दै छन ?
गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर श्रीमानसँगै क्रसरमाफियासँग अशुली धन्धामा, मेयर के गर्दै छन ?
महोत्तरीको गौशला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतो पार्टीको वफादार कार्यकर्ता बन्न खोज्दा पार्टीबाट धोका पाएको बताउदै अब जनताको मेयर बन्ने बताएका छन् ।
नगरपालिकाको बहुप्रतिष्ठित योजना अगाडी बढन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्दा काम गति लिन सेको छैन, मेयर महतोले टुडेपाटीसँग भने,‘उपमेयरको श्रीमानकै कारण नगरपालिकाको योजनाको काम समसयमा हुन सकेको छैन । आफु मेयर बन्नकालागि नगरपालिकालाई अल्झाएको छ ।’
नदी ठेक्का, उत्खनन र क्रसर उद्योग बारे फैलाइएको हल्ला अपवाह हो, मेयर महतोले थपे ,‘उप मेयर आशा लामाकै क्रसर उद्योगमा लगानि छ । नदी ठेक्का लिएका ठेक्केदार संग उपमेयर आशा लामाले आफना पीए शत्रुधन ठाकुर लगाएर २५ लाखा रुपैया माग गरेको सवैलाई थाहा छ । विष्णु लामाकै संरक्षणमा अवैध उत्खन्न भएको छ ।’
मरहा नदीमा उत्खननको बिरोध गर्ने विष्णु लामाकै संरक्षणमा बाकेमा अवैध उत्खनन भएको मेयर महतोको दावी छ । अबैध उत्खनन गराउन क्रसर सञ्चालक र नदी ठेक्का लिएका ठेक्केदारसंग २५ लाख माग गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको समेत महतोले बताए ।
पार्टीको घेराबन्दीलाई तोडदै जनताको घरदैलोमा पुग्ने छु, महतोले भने,‘जनताको परिक्षामा पास भए फुलको माला लगाउने छ ।’ आफुलाई असक्षम आरोप लगाएर केही नहुने बताउदै नगरप्रमुख महतोले हरेक नेताको वास्तविकता चाडै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुने बताए ।
मात्र १ जना पर्यटकका लागि खोलियो दुनियाको सातौँ आश्चर्य
शाहरुखको सुपरहिट फिल्म देवदासको एउटा गीतमा माधुरीले लगाएको लेहेंगाको चर्चा, जसको तौल ३० केजी थियो